တံဆိပ်စက်ရုံ - တရုတ်တံဆိပ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ
စစ်မှန်သောအောင်မြင်မှုများကိုသူတို့ရထိုက်သည့်အသိအမှတ်ပြုမှုကိုပေးသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးမြင့် bespoke ကြွေထည်တံဆိပ်များကထုတ်လုပ်မှုထက်ထုတ်လုပ်မှုထက်များစွာပိုသည်ဟုပြောကြသည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုထူးခြား။ အထူးလက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်သေချာစေရန်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်း၊ နံပါတ်စဉ်နှင့်နံပါတ်စာသားများကိုဆုတံဆိပ်များထဲသို့ထည့်ပါ။
လည်ပင်းဖဲကြိုးများ၊ ရွှေ၊ ငွေနှင့်ကြေးချောချောမွေ့စေရန်အတွက်ကွင်းဆက်တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်မည်သည့်ပုံသဏ္,ာန်၊ အရွယ်အစားသို့မဟုတ်ဒီဇိုင်းမျိုးကိုမဆိုရရှိနိုင်သည်။
ဆုတံဆိပ်များသည်ပညာရေးဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုများကိုဆုချရန်ပျော်စရာနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်တွင်သင်၏ကျောင်းသားများအတွက်ကြီးမားသောဆုလာဘ်များရရှိစေမည့်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သောအောင်မြင်မှုဆုတံဆိပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့သယ်ဆောင်ထားသည်။ သူတို့ကိုစာလုံးပေါင်းပျားတွင်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အလုပ်မှဂုဏ်ယူပါသို့မဟုတ်ဘွဲ့နှင်းသဘင်အတွက်စတိုင်နှင့်ဂုဏ်ယူစွာဖြင့်သူတို့ကိုလွှတ်လိုက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပညာရေးဆိုင်ရာအခမ်းအနားတိုင်းအတွက်ဆုတံဆိပ်များကိုသယ်ဆောင်ပေးသည်။
Crown Awards သည်အမေရိက၏အကြီးမားဆုံးအသိအကျွမ်းဆိုင်ရာထုတ်လုပ်မှုထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ Awareness ဆု၊ အသိအမြင်တံဆိပ်၊ အသိပညာဗဟုသုတများလိုအပ်သည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့၏ Awareness ဆုသည်လျင်မြန်သောပြောင်းလဲမှုနှင့်ဖောက်သည်များ၏ကျေနပ်မှုကို ၁၀၀% ဖြင့်ရရှိသည်။
ဘတ်စကက်ဘောကွင်း၌ Kingtai မှတံဆိပ်ဖြင့်အောင်ပွဲဆင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ကြိုက်ပုံစံအမျိုးမျိုး၊ အရွယ်အစားနှင့်အရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့်ဆုတံဆိပ်အမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။ ဆုတံဆိပ်တစ်ခုစီသည်တွဲဖက်ထားသောဖဲကြိုးများအမြောက်အမြားဖြင့်ပါ ၀ င်ပြီးနောက်ကျောတွင်အနည်းငယ် ထပ်မံ၍ ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ထားသည့်အက္ခရာများပါရှိသည်။ မြင့်မားသောစျေးနှုန်းများဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်သောတံဆိပ်များ၊ အမြန်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်ဖောက်သည် ၁၀၀% ၏စိတ်ကျေနပ်မှုတို့ဖြင့်၎င်းသည် slam dunk ဖြစ်သည်။
ယူအက်စ်တွင်ပြုလုပ်ထားသောကျွန်ုပ်တို့၏စီးရီး ၅၀၀ တံဆိပ်တံဆိပ်သည်အရည်အသွေးထူးခြားသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအစိုင်အခဲသောကြေးဝါ (ရှေးဟောင်းရွှေအချော)၊ အစိုင်အခဲနီကယ် (ရှေးဟောင်းငွေအချော) သို့မဟုတ်အစိုင်အခဲကြေးနီ (ရှေးဟောင်းကြေးဝါအချော) မှပြုလုပ်သည်။ အချင်း ၂″ နှင့်အထူ .102 (10 guage) ကိုတိုင်းတာထားသောဤဆုတံဆိပ်များသည်အလွန်အမင်းလေးလံ။ အလွန်သိသာသောခံစားမှုရှိသောအဆင့်မြင့်ပညာရှင်ဆန်သောတံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဆုတံဆိပ်များ၏ကျောဘက်ခြမ်းတွင်ရရှိနိုင်သည့်သေးငယ်သောပါးလွှာသောလေဆာထွင်းထုထားသည့်အံကြိုးအတွက် ...
ကြေးနီစက်ဘီးစီးတံတားကြယ်ပွင့်နှင့်ပုံစံပတ် ၀ န်းကျင်တွင် ၁ "တောင်ကြီးတောင်ငယ်ရှိစက်ဘီးစင်တာ disc နှင့်ပြည့်စုံသည်။ အချင်း ၅၀ မီလီမီတာကိုတိုင်းတာ။ တံဆိပ်ချည်နှောင်ထားခြင်းများအတွက်ကွင်းဆက်နှင့်အတူပါရှိသည်။
ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေနေပါသလား ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်မှချီးမြှင့်သောဆုတံဆိပ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးမားသော (3-3 / 4″) သို့မဟုတ်အကြီးမားဆုံး (4-3 / 4″) ဆုတံဆိပ်များအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့်“ အိမ်သို့ယူပါ”! ၁၀၀% လေဆာဖြတ်ထားသော acrylic ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးထူထပ်သော ၁/၄, ဤသတ္တဝါများသည်ကြီးမားပြီးရောင်စုံသည်။ တက်ကြွရောင်စုံသောစာသားများနှင့်ဂရပ်ဖစ်များသည်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ထားသော UV မှင်များဖြင့်အရောင်တောက်ပ။ ကြည်လင်သောအရောင်များနှင့်အတူပုံနှိပ်နိုင်သည် (ဤသည်စျေးပေါသောစတစ်ကာမဟုတ်ပါ !!) တံဆိပ်များသည်အခမဲ့ Ultra Premium 1-1 /2with နှင့်အတူပါလာသည်။
DCM Decagon ဆုတံဆိပ်များသည်ခေတ်သစ်ပုံရိပ်များပါ ၀ င်သောဂန္ထဝင်ပုံသဏ္agonာန်ကိုဆောင်သည်။ သတ္တုစပ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသတ္တုစပ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော DCM ဆုတံဆိပ်အားလုံးသည်အချင်း ၂ လက်မရှိသည်။ တောက်ပသောဂရပ်ဖစ်ထုတ်လုပ်သည့်အရောင်ဖျော့ဖျော့များရှိသည်။
အထက်ဖော်ပြပါကဏ္sectionsများသည်အားကစားနှင့်အပန်းဖြေရေးဒီဇိုင်းများပါ ၀ င်သောကျွန်ုပ်တို့၏ဆုတံဆိပ်များကိုစက်မှုလုပ်ငန်း ဦး ဆောင်သည့်ကဏ္featureတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါတို့မှာဘေ့စ်ဘော၊ ဘတ်စကတ်ဘော၊ ဘောလုံးနဲ့ဘောလုံးစတဲ့နာမည်ကြီးအားကစားတွေရှိပေမယ့်စက်ဘီးစီးခြင်း၊ ခြံစည်းရိုး၊ ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်အခြားလှုပ်ရှားမှုများအတွက်ဆုတံဆိပ်တွေလည်းရတယ်။ မည်သည့်အဖြစ်အပျက်မျိုးမဆိုအတွက်အသုံးပြုနိုင်သောကျွန်ုပ်တို့၏လူကြိုက်များသောအိုလံပစ်စတိုင်လ် torch ဆုတံဆိပ်များကဲ့သို့သောယေဘူယျဆုတံဆိပ်များပင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည်။